.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Love Theme For Gtalk
Love Theme For Gtalk
Gtalk Theme လေး တစ်ခုလောက် ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ လုပ်နေတာ ၃ ရက်ရှိပြီ။ Chat Box
နောက်ခံပုံလေးတွေ လုပ်ရတာရယ် ၊ အဲဒီပုံနဲ့ လိုက်မယ့် စာသားအရောင် ၊ လင့်အရောင်လေးတွေ ကြည့်ရတာ
အဆင်ပြေအောင် ၊ စိတ်တိုင်းကျတဲ့အထိ တော်တော်လေး အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ Theme လေး လုပ်ပြီးသွားတော့
အနော့်ချစ်သူကို ပြကြည့်တာ သူလည်း သဘောကျတယ်ဆိုလို့ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကြိုက်လို့
သုံးချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Smile ပုံလေးတွေရော ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်..။
Download: Love Theme For Gtalk
Love Theme အသုံးပြုနည်း
၁ } ကီးဘုတ်မှ Ctrl + R ကို နှိပ်ပါ။ [ Ctrl နှင့် R ကို တွဲနှိပ်ခိုင်းတာပါ။ ]
၂ } ပေါ်လာတဲ့ Run Box မှာ အောက်က စာတွေကို ထည့်ပြီး OK နှိပ်ပါ။
%userprofile%\_Local Settings\_Application Data\_Google\_Google Talk\_themes\_system\_chat/
၃ } ပေါ်လာတဲ့ နေရာမှာ Love Theme [ Folder ] ကို ထည့်လိုက်ပါ။
၄ } Gtalk က Setting ကို နှိပ်ပြီး Appearance >> Chat Theme မှာ Love Theme ကို ရွေးပြီး OK နှိပ်ပါ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဖန်တီးထားတဲ့ Love Theme အလန်းလေးနဲ့ Chatting လုပ်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ..။
မှတ်ချက် ။ ။ ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ Love Theme.rar ဖိုင်ကို WinRAR ဆော့ဝဲလ်နဲ့သာ ဖွင့်ပါရန်။
WinZip နဲ့ ဖွင့်မယ်ဆိုရင် Folder များပြားစွာ ပေါ်နေပြီး အဆင်မပြေနိုင်ပါကြောင်း...။
Download: WinRAR For 32-Bit >> http://goo.gl/u4wDB <<>> 64-Bit >> http://goo.gl/OIENq <<
ဒီ Gtalk Theme လေးကို ဒေါင်းယူ အသုံးပြုသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
နောက်နေ့တွေမှာလည်း အချိန်ရရင် Gtalk Theme အသစ်လေးတွေ လုပ်ပြီး တင်ပေးပါဦးမယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
Posted by Thurainlin at 10:26
Labels: Gtalk, Theme